Wararka Maanta: Sabti, Apr 7 , 2012-Xukuumadda Kenya oo Shacabkeeda ugu Baaqday inay Feejignaadaan Inta lagu Gudo Jiro Fasaxa "Easter Holiday"
Xukuumadda Kenya oo Shacabkeeda ugu Baaqday inay Feejignaadaan Inta lagu Gudo Jiro Fasaxa "Easter Holiday" Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Dowladda Kenya ayaa uga digtay shacabkeeda weerarro ay sheegtay in ay qorsheynayaan xoogagga Al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya, iyadoona ay dowladdu ka codsatay shacabka in ay la shaqeeyaan Booliska.
Taliyaha booliska Kenya Mathew Iteere oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay shacabka in ay muujiyaan taxadar dheeri ah inta lagu gudo jiro xilliga fasaxa ee Easter Holiday, islamarkaasina ay booliska kusoo wargeliyaan wixii ay u arkaan in ay qatar ku yihiin ammaanka dalka.
Mr. Iteere ayaa sheegay in ay heleen xog ku saabsan in xoogagga Al-shabaab ay qorsheynayaan weerarro ay fuliyaan inta lagu gudo jiro xilliga fasaxa.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ammaanka dalka siweyn loo adkeeyay haseyeeshee ciidamada ammaanka oo keliya aysan wax qaban karin, balse loo baahanyahay in ay la shaqeeyaan shacabka ku dhaqan dalka Kenya.
Hadalkan kasoo yeeray taliyaha Booliska Kenya ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan qaraxyo xooggan oo ay dad badani ku waxyeeloobeen ay ka dhaceen magaalada Mombasa iyo nawaaxigeeda, waxaana dowladda Kenya ay qaraxyadaasi ku eedeeysay Xarakada Al-shabaab.
Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Waxaa maanta gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo saraakiil ciidan oo ka socota dalka Sieraleone, kuwaasoo hordhac u ah ciidamo la filayo in dowladda Sieraleone ay usoo dirto dalka Soomaaliya. Baroordiiq Magaalada Stockholm loogu sameeyey Madaxdii Isboortiga iyo Dadkii kale ee ku dhintay qaraxii Golaha Murtida & Madadaallada (SAWIRRO) 4/7/2012 5:16 AM EST